Abantwana badlala Mat, Yoga Mat, Yoga itawuli - Tianzhihui
Phila ubomi obunempilo
Yenziwe nge-SGS eqinisekisiweyo ekumgangatho ophezulu we-TPE ngezinto ezinobuhlobo kwindalo, i-thermoplastic elastomer (TPE) inokululwa iphindaphindwe ukubonelela ngokuzinza okuhle, ukuqinisa kunye nokumelana nesiliphu.
Uhlobo lwephenyane lwangaphandle lweentente zangaphandle
Umtya wokumisa ongenanto ongashenxiyo we-TPE yoga mat ...
Umthengisi we-TPE Yoga Mat eChina
Izinto zokuQala zoNcedo lweyoga
Iibhola ze-yoga ze-peanut ezingenasiphelo ezixineneyo
Uluhlu lwezinto zeYoga
Ukutshitshiswa kwe-intshi ezingama-26 ukufunxa ibhayisikile yasentabeni
Pellentesque posuere orci lobortis scelerisque blandit. Yenze id idilesi yelacinia an, tincidunt risus ac, resultate velit. I-Quisquemos sodales suscipit tortor ditaemcos condimentum ...
NgoNovemba 19, 2018
Iimpahla zeMidlalo zeTianzhihui org ...
I-Yancheng Tianzhihui Sports Goods Co., Ltd. iququzelela abasebenzi bayo ukuba bathathe inxaxheba kwizifundo zorhwebo lwangaphandle kunye neentlanganiso zotshintshiselwano ezigcinwe lijelo leAlibaba International Station. Kule ntlanganiso, abasebenzi baseTianzhihui kunye nabarhwebi beshishini langaphandle abavela ...
Isibhengezo sokudityaniswa kwenkampani ...
Mholweni! Abahlobo bethu abathandekayo, abathengi abatsha nabadala! Enkosi kwinkampani yakho apha endleleni! Ngenxa yokudityaniswa kweshishini lenkampani yeqela lethu! IYancheng Tianzhihui Mat Co, Ltd. kunye neYandu Tianhui Umzi mveliso weZinto zeMidlalo phantsi kweqela lethu malunga nokudibanisa nokusebenza. Igama elitsha emva kwe ...
Eva amagwebu eziphathekayo mat Featu ...
Izibophelelo zoxinzelelo, Ukuxhathisa iBar Bar, Ukuxhathisa iBhendi ekwi-Intanethi, Ukuxhathisa iBhendi ebekiweyo, Ukuxhathisa iiBhendi zoBuqaqawuli, Ijimi ye-Elastic,